आजको राशिफल (२०७४ माघ २९ गते/२०१८ फेब्रुवरी १२)
वि.सं. २०७४ माघ २९ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ फेब्रुवरी १२ तारिख,
फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, धनु राशिको चन्द्रमा, वज्र योग, कौलव र तैतिल करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : देवघाटमा मकरस्नान र माघमेलाको समाप्ति,
भोलिको चाडपर्व र उत्सव : फाल्गुन सङ्क्रान्ति, महाशिवरात्री, भौम प्रदोष व्रत, पिण्डेश्वर धाम (धरान, सुनसरी), हलेसी महादेव, पशुपतिनाथ लगायत समस्त शिवालय र शिवमन्दिरमा उत्सव, जात्रा, मेला आदि, शिलाचह्रेपूजा (नेवारी पर्व),
राहु काल : बिहान ०८:१० देखि ०९:३३ सम्म
यमघण्ट : दिउँसो १०:५६ देखि १२:१९ सम्म
गुलिक काल : दिउँसो ०१:४२ देखि ०३:०५ सम्म
अमृत वारवेला : बिहान ०६:४७ देखि ०८:१० सम्म र साँझ ०४:२८ देखि ०७:२८ सम्म
लाभ वारवेला : दिउँसो ०३:०५ देखि ०४:२८ सम्म
शुभ वारवेला : बिहान ०९:३३ देखि १०:५६ सम्म
आज घरपरिवारलगायत दाम्पत्यसम्बन्ध मजबूत बनाउने समय हो, तर सप्तमस्थ चन्द्रमाको प्रभाव कमजोर छ । पठनपाठनमा रुचि जाग्ने छैन । मन नलागेको काममा खट्रनु पर्नेछ । बाध्यताका काममा अलमलिनुपर्ला । गरेको काममा पनि बाधा सिर्जना हुनेछ । सोचेको लाभ नमिल्न सक्छ । आफन्तसँग असमझदारी बढ्न सक्छ । पतिपत्नीमा पनि अविश्वास बढ्न सक्छ । यात्रामा धनमाल हराउने समय छ । रमाइलो गर्दागर्दै अचानक खिन्नता बढ्ने परिस्थिति आउन सक्छ । अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ, तर आत्मबल बढाएर मिहिनेत गर्दा डराइहाल्ने परिस्थिति बन्दैन । रोजगारी वा व्यवसायका क्षेत्रमा फाइदै हुनेछ ।
चोरी वा ठगीमा परिने समय छ । आर्थिक कारोबार गर्दा निकै नै सजगता अपनाउनुहोला । आफ्नैबाट धोका हुनसक्छ । तर मिहिनेत गर्दा मौकाको फाइदा उठाउन सकिने छ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदाकै योग छ । यात्राको व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । द्वन्द्व तथा प्रतिस्पर्धामा सावधानीका साथ जुट्नुपर्नेछ । व्यवसायमा फाइदा उठे पनि तत्काल खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । शत्रुको चलखेल र रोगको प्रकोप सुरु हुनसक्छ । झैझगडा र मुद्दा–मामिलाबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । हतार र आवेशमा आएर काम गर्नु हुँदैन । सरकारी कडिकडाउको सिकार भइनेछ । थिचोमिचो गर्नेहरूले पनि सताउनेछन् ।